KULUNGELE OKUNYE UKUNQANYULWA KUKAGESI NGEMUVA KUKANDASA | Scrolla Izindaba
KULUNGELE OKUNYE UKUNQANYULWA KUKAGESI NGEMUVA KUKANDASA
Njengoba u-Eskom ememezela ukunqanyulwa kukagesi izinyanga ezintathu, ingcweti ehamba phambili ngezezixwayiso ithi ukunqanyulwa kukagesi cishe kuzoqhubeka isikhathi eside.
Isazi sezamandla uChris Yelland uthe yize abakwa-Eskom bethi abantu baseNingizimu Afrika kufanele bazilungiselele izinyanga ezintathu zokunqanyulwa kukagesi, maningi amathuba okuthi le nkinga inkulu futhi izothatha isikhathi eside ukuyilungisa.
“Inkinga ukuthi izikhungo zokuphehla ugesi azisalungiswa ngendlela efanele kanti ezintsha azisebenzi kahle ukunikeza ikhefu lezi ezintsha,” kusho uYelland.
Ubuye wengeza ukuthi lo mzuliswano wakamuva wokunqanyulwa kukagesi uzoba nemiphumela emibi kakhulu ngenxa ye-Covid.
“Umnotho usuvele unenkinga enkulu njengoba abantu belahlekelwa yimisebenzi ngenxa ye-Covid-19. Njengoba abantu abaningi besebenza emakhaya, ukucinywa kukagesi kuzoba yizindaba ezimbi nje emnothweni odonsa kanzima,” kusho uYelland.
UYelland uxwayise ngokuthi yize uhulumeni enezinhlelo azibekile zokwakha izigxobo ezintsha, asikho isiqinisekiso sokuthi zizolethwa ngesikhathi.
“Isiteshi sikagesi i-Medupi sidle uhulumeni imali ephindwe kathathu kunezindleko zokuqala ezanikezwa ukuthi zilethwe ngowezi-2004. Lo ngowezi-2021 futhi awukalethwa kuze kube manje.”
UYelland weluleke abathengi ukuthi bathole amanye amandla noma yikuphi lapho bengathola khona.
Ubuye wanxusa uhulumeni ukuthi avumele abathengi abakhulu bakagesi ukuthi bazenzele amandla abo.